Ubuntu Foramu Yabiwa | Linux Vakapindwa muropa
Nehurombo, vabati vari kurwisa linux zvakare. Ino nguva iyo Ubuntu foramu ndiyo yakabatwa, nekuti ivo vakabvisa dhata rese revashandisi veforum, nekuda kwekukanganisa kwakabvumidza SQL Injection kuitiswa.
Shamwari, tine nhau dzakaipa kwauri. Canonical ndichangobva kuzivisa kuti iyo yakasununguka Ubuntu foramu yakabiwaNaizvozvo, zvinokurudzirwa kuti uchinje pakarepo matsamba ekuwana.
Ichi chiitiko chakabata vangangoita mamirioni maviri evashandisi, kubvira lVapanduki vakwanisa kuwana dhatabhesi yeforamu, kuwana mukuita IP kero, zita rekushandisa, email uye mapassword evashandisi veforum.
Hackers ivo vakapinda nekutenda kukanganisa kwekuchengetedza muforamu, Iyo yaive isina kukwana saiti kudzivirirwa pakurwisa SQL jekiseni-rudzi kurwisa.
SQL jekiseni inosanganisira kupinda SQL mirairo pane ino saiti kuitira kuti uwane iyo dhatabhesi. Kutenda nekutyora kwekuchengeteka, varwisi vakakwanisa kuwana tafura yevashandisi vesaiti, iyo iine ruzivo rwese nezvevashandisi veforamu.
Canonical yakatokumbira ruregerero mukuburitswa uku, iyo inotiwo chikonye chinotarisirwa kugadziriswa munguva pfupi iri kutevera uye kuti zvese zvinodzokera pane zvakajairwa. Dai ndaive iwe, ini ndaizoshandura password yeemail yako, kunyanya avo vanoshandisa imwecheteyo password yeiyo Ubuntu foramu uye yeemail.
Hapana mubvunzo unofanira kungwarira zvikuru nezvinhu izvi, sezvo aya maburi ekuchengetedza anogona kutenga mamirioni evashandisi zvakanyanya. Nekudaro, Canonical ikambani huru uye pasina mubvunzo ichaziva nzira yekugadzirisa iyi mamiriro kuti irege kuitika zvakare.
Nehurombo, uku hakusi kwekutanga kurwiswa kwakaitwa kurwisa linux uye yemahara software uye hakuzove kwekupedzisira. Yakanzwika kwaive kurwiswa kweLinux Mint webhusaiti, mavakachinja iyo inoshanda sisitimu yekushandisa ISO kune yakaipa ISO inoda kuba data.
Iye zvino ndega ngatitarisirei izvi zvinongoramba zviri anecdote,uye izvo zveCanonical zvinoziva kuzvidzosera pamwechete.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Ubuntu Foramu Yabirwa
Izvi zvakakodzera maWindows !!!!!
iyi ndiyo huswa hwekupedzisira ... hasha dzakadii dzinondipa ini!
dana skaly akadaro
Izvi zvinokanganisa sei vashandisi? Ndiri novice uye ndinoda kuziva kana ndichifanira kushandura mushandisi yekuwana password uye kuti zvaizoitwa sei pakadai. Ndatenda zvikuru nerubatsiro!
Pindura kuna Dana Skaly
Sevha Zviteshi akadaro
Sezvavanotaura mune ino posvo, vanokanganisa vanokwanisa kuwana yako email uye password (yakavharidzirwa) saka kana vakwanisa kudhiraina password yako vanogona kusimbisa neakaundi yako muforamu uye nenzira imwecheteyo vanogona kuratidza mune mamwe mapuratifomu senge social network uye nevamwe nguva dzose uye kana iwe wakashandisa zvakafanana mapassword pane iwo masaiti. Ndosaka zvichikurudzirwa kwazvo kuti uchinje password yako mune iwo masosi auri kushandisa zvakafanana neayo muforum forum.
Pindura kuSalva Corts
Pablo Muchena akadaro
Wakaverenga here chinyorwa?
Pindura Pablo Blanco
Mamwe info akadaro
Izvi ..., chiziviso chinokosheswa, asi chinongedzo chehurukuro yambotaurwa hachizokuvadza, sezvo paine zviuru zvemaforamu eUbuntu uye izvozvi handizive kana ini ndakabatwa nenyaya iyi kana kwete.
Kana usina chokwadi, chinja password yeemail, ndeipi inokuvadza iyo isingaite. Usashandise imwecheteyo password kupinda muforamu, yeiyo mail, ye ... UYE PASI PESE PAKUFUNGA KUTI PANE VAKAIPA VANHU HAVAPI MAPASI PASI NEEMA EMAILS PAMWE CHETE.
Ivo havana kubira linux, sekureva kwazvinoita pakupera kwechinyorwa, vabira foramu, iyo isiri chikamu che linux
Charles German akadaro
Nechikonzero ichocho, ivo havashandise makwaya akafanana
Pindura Carlos Aleman
Iwe hauna kubira foramu yeLinux sekutaura kwekupedzisira panoperera, vabira iyo Ubuntu foramu, isiri chikamu cheLinux